ओलीलाई व्यङ्ग्य गर्दै नेपालले सुनाए नांगै हिँडेका राजाको कथा
नेपाल लाइभ बुधबार, पुस २९, २०७७, १९:५३
काठमाडौँ- नेकपा नेपाल–प्रचण्ड पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओली तानाशाही रहेको भन्दै लोककथा सुनाएर व्यङ्ग्य गरेका छन्। ओलीले पार्टी कमिटीको निर्णय नमान्ने, विधि पद्धति नमानेर निरकुंश व्यवहार देखाएको भन्दै नेपालले राजाको कथा हालेर आलोचना गरेका हुन्।
पार्टी कमिटीमा छलफल बहस गरी जनताको पार्टी बनाउन खोज्नेलाई ओलीले सधैँ अपराध ठान्ने गरेको नेपालले बताए।
ओलीप्रति व्यंग्य गर्दै नेपालले सुनाएको कथा यस्तो छ-
एउटा देशको राजा नांगै हिँडेछ। कसैको हिम्मत भएनछ। राजा नांगै छन् भनेर भन्न । त्यो भन्दा अघि राजालाई ऐना देखाईएछ । राजालाई मन मनै म त नाग्गै छु भन्ने लागेकै थियो। त्यति नै बेला राजाले सोधेछन्। मैले लगाएको लुगा कस्तो छ? सबै चाटुकारले गजब छ। महाराज गजब छ भनेछन्।
सबैले एकै स्वरमा राजाको पोशाकको तारिफ गरेछन्। अति सुन्दर देखियो महाराज। हजुरलाई कति सुहाउँदो रहेछ भनेर तारिफ गरेछन्। राजा पनि दंग परेछन्। त्यसपछि राजा सडकमा निस्किएछन्। मान्छेहरु राजालाई देखेर कानेखुसी गर्न थालेछन्। राजा नांगै छ भन्ने कसैको हिम्मत भएनछ। भन्यो भने काट्न सक्छ। गोली ठोक्न सक्छ भन्ने प्रजालाई पर्‍यो। राजा नांगै छ भन्ने कसको हिम्मत? कसैले राजा नांगै छ भन्ने हिम्मत गरेनन्। साचो बोल्ने सत्य बोल्ने अबोध बालकले राजा त नांगै छन् भनेछन्। त्यो भन्दा बित्तिकै सबैले भन्न थाले- हो राजा नांगै छन्। हो राजा नांगै छन्। बल्ल त्यो राजा बेइज्जत भएपछि दरवार फर्किएछ। केपी ओली पनि नांगै राजा जस्तै छन्।
केपी ओलीको वरिपरि बस्नेले कहिलै प्रतिप्रश्न गर्न नसक्ने नेपालले ठोकुवा गरे। ओली गुटका सबै नेता कार्यकर्ताले बा भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको बताए। कतिपय नेता ओलीभन्दा उम्मेरले जेठो उम्मेरका भएपनि बा भनेरै सम्बोधन गर्ने गरेको नेपालले बताए।
प्रतिनिधि सभा विघटनः सर्वोच्चमा पाँचौ दिनको बहस जारी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको पाँचौ दिनको बहस सर्वोच्च अदालतमा जारी रहेको छ। गत आइतबारदेखि मूल विषयमा प्रवेश गरेको इजलासमा... बिहीबार, माघ ८, २०७७